Midea Ceiling Fan 56-inch FC140-15A ~ ICT.com.mm
HomeMidea Ceiling Fan 56-inch FC140-15A
Midea Ceiling Fan 56-inch FC140-15A
Item Number: FC140-15A Product Name: 56inch Ceiling Fan Speed Type:5Rated Power: 75W Number of propellers : 3wings Wingspan: 140cm Control: Gearbox level နာမည်ကျော် အိမ်သုံးပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ် Midea မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မျက်နှာကြက်ပန်ကာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေအတွက် ခိုင်မာတဲ့အရည်အသွေး၊တပ်ဆင်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနဲ့... [Learn more]
Brand: MideaFilter by: Fans, VSK
Item Number: FC140-15A
Product Name: 56inch Ceiling Fan
Speed Type: 5
Number of propellers : 3wings
Control: Gearbox level
နာမည်ကျော် အိမ်သုံးပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ် Midea မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မျက်နှာကြက်ပန်ကာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေအတွက် ခိုင်မာတဲ့အရည်အသွေး၊တပ်ဆင်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတို့ကို ဦးစားပေးထုတ်လုပ်ထားပြီးအိမ်(သို့မဟုတ်)အခန်းတွင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ လေစီးကြောင်းတွေကို နေရာအနှံ့ ညီညီမျှမျှရောက်ရှိအောင် ဖြန့်ကျက်ပေးနိုင်တာကြောင့် ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီကို ဖြတ်သန်းဖို့သင်နဲ့သင့်မိသားစုအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ မျက်နှာကြက် ပန်ကာတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ FC140-15A ဟာ ဒလက် သုံးခုပါ မော်ဒန်ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဒလက်တစ်ခုရဲ့ အလျားဟာ 140 cm ရှိတဲ့အတွက် အေးမြတဲ့ လေတိုက်ခတ်မှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဧည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်သို့မဟုတ် ရုံးခန်းလို နေရာတွေမှာ လှလှပပ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အမြန်နှုန်း(၅) မျိုးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပါဝါအသုံးပြုမှုကတော့ 75W ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
FC140-15A 56inch Ceiling Fan
Midea Ceiling Fan FC140-15A has durable quality, convenience and absolute safety for users. Withalong, wide rotor, great stride, the device is capable of dispersing large air currents evenly around the surrounding space. Using Media FC140-15A ceiling fan is the perfect choice for your family in the hot, hot summer.
Comfort with Lifestyle
FC140-15A hasamodern design with three propellers, the length of each blade is 140cm, giving the living room, kitchen or office space comfort, elegance and airy.